RAHARAHA KIDNAPPING : Tra-tehaka tao Anjozorobe Randriamanga, jiolahy ikoizana
Raha toa ka efa an-taonany maro ireo trangana fakàna an-keriny nifanesisesy tamin’ny Faritra maro manerana ny Nosy, dia tsy mitsahatra manao ny fanadihadiana lalina hatrany ny mpitandro filaminana eto amintsika mikaroka ireo olon-dratsy. 21 janvier 2020
Nahitam-bokany tokoa izany tamin’ity taona ity satria sarona tsikelikely ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanatanterahana fakàna an-keriny na “kidnapping “ mahery vaika, toy ny teto an-drenivohitra, ohatra. Efa saika tra-tehaka avokoa ireo jiolahy mpaka an-keriny, ary ny teratany karàna no tena tsikaritra fa tena matetika lasibatra amin’ity asa ratsy ity.
Nahazoana loharanom-baovao ihany koa izao ny faran’ny herinandro lasa teo iny fa voasambotra Randriamanga izay mpaka an-keriny tena nikoizana sy efa anisan’ ireo ela nokarohina. Araka ny tatitra voaray dia voasambotry ny miaramilan’ny 3RG DAS Marotsipoy, ny zoma faha 17 janoary 2020 tao Ambohitsimarofotsy, Distrikan’ Anjozorobe ity farany.
Nandray fepetra hentitra avy hatrany ny teo anivon’ny zandary tao an-toerana, ka nosokafana ny famotorana lalina natao taminy. Aorian’izay moa dia hiakatra Fampanoavana ny raharaha. Miezaka hatrany moa ny eo anivon’ny mpitandro filaminana eto amintsika amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa ary koa mikaroka ireo jiolahy nahavanon-doza maro mbola tsy hita. Raha ny lafiny fakàna an-keriny izao dia anisany tanjona goavana apetrak’izy ireo ny hanafoanana tanteraka ary koa hisamborana ireo atidoha mpikotrika ity tranga ity eto amintsika.